မီးပြတိုက်: April 2008
I have no life or death.
I make the tides of breathing my life & death.
I have no fiend.
I made my mind my friend.
I have no armor.
I make benevolences my armor.
I have no castle.
ကျွန်ုပ်တို့ တစ်ယောက်ချင်းစီကို ကျွန်ုပ်တို့ ကြိုက်သလို သုံးဖို့ဆိုပြီး အချိန်တွေ အပြည့်အ၀ ပေးထားတယ်။ အဲဒီ အချိန်တွေကို ကျွန်ုပ်တို့ ကြိုက်သလို သုံးနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် နောက် တစ်နေ့ ကိုတော့ ဘယ်တော့မှ ပြန်ရမှာ မဟုတ်ဘူး။
စတင်ပါ။ စတင်ခြင်းသည် အလုပ် တစ်ဝက် ပြီးခြင်းဖြစ်သည်။ ကျန်တစ်ဝက်ကို ထားလိုက်ပါဦး.......။
နောက်တစ်ကြိမ်စတင်ပါ။ ထိုအခါ သင့်အလုပ် တစ်ခုလုံး ပြီးစီးသွားပါလိမ့်မည်။
အရူးတစ်ယောက်သာ ခြေနှစ်ဖက် စလုံးဆင်းပြီး ရေအတိမ်အနက်ကို စမ်းသပ်သည်။
ခြေထောက်ကို မထိန်းနိုင်သဖြင့် ငှက်တို့ ပိုက်ကွန်၌မိကြ၏။ လျှာကိုမထိန်းနိုင်သဖြင့် လူတို့ စိတ်ဆင်းရဲမှုတို့၌ ငြိကြ၏။
ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံရေးတွင် စကားသည် အလွန် အရေးကြီးပေ၏။ ပညာရှိတို့သည် စကားမပြောမီ စဉ်းစားကြ၏၊ လူမိုက်တို့သည် ပြောပြီးမှ မိမိဘာပြောလိုက်သည်ကို ပြန်စဉ်းစားတတ်ကြ၏။
လူ့ဘ၀ အောင်မြင်ခြင်းတရား ၁၀ ပါးတွင် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာ အဓိက အချက်တစ်ချက် အနေဖြင့် ပါဝင်သည်။
အပေါင်းအသင်း မိတ်ဆွေများနှင့် ဆက်ဆံရာတွင် ရောလွန်းပါက မိတ်ပျက်တတ်၏။ ပုံမှန် ခင်မင်လေးစားစွာ ဆက်ဆံခြင်းသာ အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ပျော်ရွင်မှု တံခါးတစ်ပေါက် ပိတ်သွားသောအခါ အခြားတစ်ပေါက်က ပွင့်လာတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်ုပ်တို့က ပိတ်သွားတဲ့တံခါးကို ကြာရှည်ကြာမြင့်စွာ ကြည့်နေတက်လွန်းတော့ ပွင့်လာတဲ့ တခြားတစ်ပေါက်ကို မမြင်မိတော့ဘူး။
ဟာသမရှိလျှင် သင် အသက်ရှင်သန် မနေနိုင်။
သင့်အနေဖြင့် သင့်ကိုယ်သင်ပြန်ပြီး ရယ်မောနိုင်စွမ်းရှိရမည်။ မဟုတ်လျှင် သင် နာကျည်းခံစားရလိမ့်မည်။
ဘယ်သူပဲမျှားမျှား အဆီး အတားမရှိတဲ့ ကန်တွေရှိသလို၊ "ငါးမမျှားရ" ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်နဲ့ ကန်တွေလည်း ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ။ ကန်ထဲကငါးကတော့ အစာတွေ့ရင် ဟပ်မှာပဲ။ ငါးမမျှားရ ဆိုတဲ့ကန်ထဲမှာ ငါးမဟပ်ဘူးလို့ မရှိပါဘူး။ မျှားတဲ့သူကို မမျှားရဲအောင်၊ မမျှားရအောင် ဆိုင်းဘုတ် တပ်ထားတဲ့ သဘောပါပဲ။ ငါးမျှားရတာ လွယ်တာနဲ့၊ ခက်တာပဲ ကွာတယ်။
မနေ့က ဆိုတာအိပ်မက်၊ မနက်ဖြန်ဆိုတာ စိတ်ကူး၊ ဒီနေ့သာ ဘ၀ဖြစ်တယ်။ ဒီနေ့မှာ အကောင်းဆုံး လုပ်ပါ။
ကောင်းတဲ့ စစ်ပွဲ ဘယ်တုန်းကမှ မရှိခဲ့သလို၊ မကောင်းတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆိုတာလည်း မရှိပါဘူး။
ကျေးဇူးရှိတဲ့ လူတွေကို ကိုယ်က ပြန်ပေး နိုင်တာလောက် ၀မ်းသာ စရာကောင်းတာ လောကမှာ မရှိနိုင်ဘူး။
တကယ်တော့ သိရုံသိတဲ့ အသိဥာဏ်ဟာ မိမိအတွက် အသုံးမကျလှဘူး။ သိတဲ့အတိုင်း ဘယ်လိုပင် ခက်ခဲခက်ခဲ၊ အဆင်းရဲ အပင်ပန်းခံပြီး အဲဒီပညာကို မိမိဘ၀မှာ လက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်မှ အကျိုးရှိနိုင်မယ်။
နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ပညာတစ်ခုခု ရပါစေ။
အသားတင် အမြတ်ရှာပါ။ ပညာရရင်ရ။ ပညာမရရင် ဥစ္စာရ၊ ဥစ္စမရရင် ကုသိုလ်ရရမယ်။
ပညာရှိသူကို ရှာပေါင်းပါ။ လူတော်လူကောင်းကို ရှာဆက်ဆံပါ။
ဒါဆို မပူနဲ့သား..... သား တကယ်ကြိုးစား နေတာမှန်ရင် မအောင်မြင်စရာမရှိဘူး။ အောင်မြင်လိမ့်မယ်။ မကြိုးစားတော့ဘူးဆိုမှသာ ရှုံးနိမ့်သွားတာ။
ဘယ်တော့မှ ပြန်မရနိုင်သော အရာသုံးမျိုး
မိမိကို မိမိ ယုံကြည်မှု။
စိတ်ရင်းအမှန်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ရိုးသားခြင်း။
မာနကြီးခြင်း၊ မိမိကိုယ်မိမိ အထင်ကြီးခြင်းနှင့် ၀င့်ကြွားခြင်း။
တစ်ကြိမ်ဆုံးရှုံးပြီးနောက် ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် ခက်ခဲသောအရာ (၃)မျိုး
ယခုအခါတွင် အဓိဋ္ဌာန်တရားစခန်းများကို ယောဂီနှင့် လူအများ ၀င်လာကြသည်မှာ အထူး အားရ ကျေနပ်ဖွယ် ကောင်းလှသည်။ အတုယူဖွယ် ကောင်းလှသည်။ ဗုဒ္ဓသာသနာသမိုင်းမှ မှတ်သားဖွယ်ရာ သစ္စာဓိဋ္ဌာန် များကို မြင်းမူ ဆရာတော် ဘုရားကြီး ဟောကြားခဲ့သော တရားများမှ အနည်းငယ်ကို ကောက်နှုပ် ဖော်ပြလိုက်ရပါသည်။
စန္ဒကုမာရဇာတ်တွင် မင်းသားကိုသတ်ရန် အမိန့်ချရာ၊ သစ္စာတရားနှင့် အဓိဋ္ဌာန်ကြောင့် သေဘေးမှလွတ်၍ တိုင်းပြည်၌ မင်းဖြစ်ခဲ့ရသည်။
သုဝဏ္ဏသာမ မြားဆိပ်ထိရာ သစ္စာဓိဋ္ဌာန်ကြောင့်၊ မိဘရော သားရော ချမ်းသာရခဲ့သည်။ မျက်စိများပါ အလင်းရခဲ့ကြသည်။
ဟရိတစရသေ့ မိဖုရားနှင့် မှားမိ၊ သစ္စာဓိဋ္ဌာန်ကြောင့် သေဘေးမှ ချမ်းသာရခဲ့သည်။
မုဒုလက္ခဏရသေ့ မိဖုရားနှင့်မှားမိရာ သစ္စာဓိဋ္ဌာန်ကြောင့် သေဘေးမှ လွတ်ခဲ့ရသည်။
သမ္ဘူလမိဖုရား သစ္စာဓိဋ္ဌာန်ကြောင့် နူနာရောဂါပျောက်ကင်း၍ ထီးနန်းပါ ရခဲ့သည်။
ကိုမာဃ၀တ္တုတွင် ထောင်ထိပ်တွင် နေထိုင်သောဗျိုင်း ရေငတ်ရာ သစ္စာဓိဋ္ဌာန်ကြောင့် ရေများတက်လာ၍ ရေသောက်ခဲ့ရသည်။
ဒီဃာယနဇာတ်တွင် ကလေးကို မြွေထိရာ သုံးဦးသားတို့၏ သစ္စာဓိဋ္ဌာန်ကြောင့် ကလေးအသက် ချမ်းသာရခဲ့သည်။
ပေါလဇနက္က၊ ထောင်ချခြင်း ခံရရာ သစ္စာဓိဋ္ဌာန်ကြောင့် ထောင်ဘေးမှလွတ်၍ မင်းဖြစ်ခဲ့ရသည်။
ငါးရန့်မင်းဇာတ်၌ မိုးကြီးခေါင်ရာ ငါးတွေအားလုံးဒုက္ခရောက်စဉ် ငါးရန့်မင်း၏ သစ္စာဓိဋ္ဌာန်ကြောင့် မိုးကြီးရွာကာ အားလုံးချမ်းသာရခဲ့သည်။
အလောင်းတောင်ငုံးမင်းဇာတ်တွင် တောမီးကြီးလောင်ရာ ငုံးမင်းကို မိဘများကပင် ပြစ်ပြေးခဲ့ကြသည်။ ငုံးမင်း၏ သစ္စာဓိဋ္ဌာန်ကြောင့် မီးများငြိမ်း၍ အသက်ချမ်းသာရခဲ့ရသည်။
တရားထိုင်လျှင်၊ ယောဂီရှင်၊ အစဉ်ပွားဖို့ရာ။
နှာသီးဖျားတွင်၊ စိတ်အစဉ်၊ ထွက်ဝင်သတိထား။
အာနာပါနံ၊ မဂ်ဖိုလ်ဥာဏ်၊ အခြေခံကြောင်းတစ်ရား။
ပရိကမ္မာ၊ ဘာဝနာ၊ မှန်စွာဤသို့ပွား။
ပေါ်သိ ပေါ်သိ၊ နိဗ္ဗာန်ထိ၊ ဒိဋ္ဌိအားလုံးကွာ။
ပေါ်တာဟူသမျှ၊ ရုပ်မှတ်ကြ၊ သိက နာမ်ခေါ်တာ။
ရုပ်နာမ်နှစ်ပါး၊ ဥာဏ်ပိုင်းခြား၊ များများရှုပေးပါ။
ပေါ်တာ အစားစား၊သတိထား၊ ဓာတ်တရားရုပ်နာမ်ပါ။
အာနာပါနအတိသုတ်၊ မိန့်ဖော်ထုတ်၊ အလုပ်ဝိပဿနာ။
ဥပရိပဏ္ဏာသ၊ ထုတ်ဖော်ပြ၊ ဗုဒ္ဓဘဂ၀ါ။
မဟာသတိပဋ္ဌာန်၊ အခြေခံ၊ ကျမ်းဂန်ပြခဲ့တာ။
သဘောဟုတ်မှ၊ လောကုတ္တရ၊ မှတ်ကြနိဗ္ဗူတာ။
သဘောမမှီ၊ ဘုံလောကီ၊ ဆုံလည်နွားပမာ။
ဆရာနည်းယူ၊ မြို့မင်းမူ၊ ရေးသူထေရ်ဆရာ။
တစ်သုံးခြောက်ငါး သက်သေထား၊ မှတ်သားခုကောဇော။
တော်သလင်းကျော်၊ ငါးရက်နော်၊ ပြီးသော်နိဋ္ဌိတာ။
Once in Persia reinedaking. Who upon his signet ring? Gravedamaxim true and wise, which, if held before the eyes. Gave him counsel ataglance. Fit for every change and chance; solemn worlds, and these are they; "Even this shall pass away".
Don't concern yourself with matters that are not your business.
Visit not without invitation.
Speak not unless question.
It is said for that for money you can have everything, but you cannot.
Servant, but not faithfulness;
Leisure, but not peace.
You can have the husk of everything for many, but not the kernel.
လူတစ်ယောက်နဲ့ ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သူနဲ့ တန်းတူဖြစ်အောင် အဆင့်နိမ့်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ကိုယ့်စိတ်ကို သူများက ၀မ်းနည်းအောင်၊ ၀မ်းသာအောင် လုပ်လို့ရနေပြီဆိုရင်၊ ကိုယ်က သူ့လက်ခုတ်ထဲကရေ ဖြစ်သွားပြီ။
သူတစ်ပါးမှာ အမှားတစ်ခု ချို့ယွင်းချက်တစ်ခုခု တွေ့တဲ့အခါ ကိုယ့်မျက်နှာကို မှန်ထဲမှာ ကြည့်နေရသလို သဘောထားပါ။
ကိုယ့်အပြစ်ကို ရှာပြတဲ့သူကို ကိုယ့်ကျေးဇူးရှင်လို့ သဘောထားပါ။
ကိုယ်က သူများကို အပြစ်တင် ရှုံ့ချနေတာဟာ သူဘယ်လိုလူလဲ ဆိုတာ မပေါ်လွင်ဘူး။ ကိုယ်ဘယ်လိုလူလဲ ဆိုတာ တော့ သေသေချာချာ ပေါ်လွင်သွားပြီ။
သူတစ်ပါးကို အပြစ်မြင်လို့ရှိရင် အဲဒီအပြစ်မျိုး ကိုယ့်မှာရှာကြည့်ပါ။ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ သူတစ်ပါးမှာ ကောင်းတာမြင်ရင်လည်း အဲဒီလို ကောင်းတာကော ငါ့မှာ မရှိဘူးလား။ ရှိရင်ကောင်းပါတယ်။ မရှိသေးရင် ရှိအောင်လုပ်ရမည်။
ကိုယ်စိတ်ကို ကိုယ်သိတာဟာ လူ ကလွဲလို့ တခြား ဘယ်သတ္တ၀ါမှ မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါဟာ လူသားရဲ့ ထူးခြားတဲ့ အရည်အချင်းပါ။ ဒီအလုပ်ကို မလုပ်သေးသ၍ လူ မပီသသေးသူ၊ အဆင့်မြင့်လူသား မဖြစ်သေးသူ ဖြစ်နေမှာပါ။
သတိနဲ့ နေတာများလေလေ -> လူကြီးဆန်လေလေ၊ ရင့်ကျက်လေလေပါပဲ။
ပစ္စုပ္ပန်ဟာ တန်ဖိုးအရှိဆုံးပါ။ အနာဂါတ်ကို မျှော်ပြီး ပစ္စုပ္ပန်ကို မဖြုန်းသင့်ပါ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူ၊ ကိုယ့်အလုပ်ကိုကိုယ် အတက်နိုင်ဆုံး ကောင်းအောင် လုပ်တဲ့သူဟာ သူ့ဟာသူ စိတ်ကျေနပ်မှု ရနေတယ်။ စိတ်ချမ်းသာနေတယ်။ ပျော်နေတယ်။ သူများချီးမွမ်းတာ အပေါ်မှာ မှီခိုမှု မရှိဘူး။ လွတ်လပ်နေတယ်။
လူတွေကို မယုံကြည်တဲ့သူ၊ လူတွေကို သည်းမခံ ခွင့်မလွတ် နိုင်တဲ့သူတွေဟာ အဖေါ်မဲ့တတ်တယ်။ သူများအကြောင်း မကောင်း ပြောတတ်သူ တွေမှာလည်း အဖေါ်မဲ့ တတ်တယ်။
ခွင့်လွတ်ခြင်း ဆိုသည်မှာ ပျော့ညံ့ခြင်းမဟုတ်၊ သတ္တိရှိခြင်းသာ။
သူများကိုနိုင်ချင်တာ ကလေးဆန်တဲ့စိတ်၊ သူများကို အပြစ်ရှာချင်တာ မရင့်ကျက်တဲ့စိတ်။
သင်ဘယ်လို လူလဲဆိုတာ သိချင်လျှင် သင့် ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေကို အကဲခတ်ပါ။ သင်နှင့် သင့်ပတ် ၀န်းကျင်က လူတွေရဲ့ ဆက်ဆံရေးဟာ သင့်ကိုသင် ဘယ်လိုလူလဲဆိုတာ ဖေါ်ပြနေပါတယ်။
သူများကို ဘယ်လိုလူစား လို့ပြောတာဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်လိုလူစား လို့ပြောတာနဲ့ တူပါတယ်။
တစ်ကိုယ်တည်း နေခြင်းဟာ လေးနက်တဲ့ အသိဥာဏ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေတယ်။
တစ်ကိုယ်တည်း စိတ်ချမ်းသာစွာ နေထိုင်နိုင်ခြင်း၊ အများနှင့် အဆင်ပြေပြေ နေနိုင်ခြင်း သည် မြင့်မားသော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရင့်ကျက်မှုဖြစ်သည်။